Vivaldi 2.10: inowirirana zvakanyanya nemawebhusaiti uye neshanduko muMushandisi Agent | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo munhu asingararame paChannel chete, Vivaldi Technologies yatanga chirongwa chitsva kune yayo yewebhu browser. Ndezve Vivaldi 2.10, uye inouya nenhau mukati nekunze, sezvo sarudzo yawedzerwa iyo inobvumidza iyo browser kuti ichinje theme kubva muchiedza kuenda kurima pane imwe nguva. Nekudaro, imwe yeanonyanya kufarirwa mabhurawuza, nemvumo yeChannel, Firefox kana Safari, inobatana neiyo fashoni kwete chete yerima tema, asiwo ye otomatiki switch.
Zvichida shanduko yakakosheswa yakaunzwa naVivaldi 2.10 ishanduko kuMushandisi Agent iyo inokonzeresa mapeji ewebhu kuti aone Vivaldi Browser seye inoenderana neChromium browser pamapeji mazhinji ewebhu ayo akambove nematambudziko mubrowser yeaimbova CEO weOpera. Nenzira iyi, Vivaldi anozogona fambisa mushe pamapeji ewebhu seGoogle Docs kana Netflix, chimwe chinhu chisingaite mushanduro dzakapfuura. Uye ndezvekuti kwete chete munhu anogara paChannel, asi vazhinji vacho vanogara paChromium.
Vivaldi 2.10 yatotibvumidza kuona Netflix
Zvinoenderana neVivaldi Technologies, vakasarudza kuratidza "Vivaldi" ku Mushandisi Agent kungoita kudada, asi iko kudada kwave kukuvadza vashandisi nekuti makwikwi anga achivadzivirira. Sezvo zvaVivaldi 2.10, izvi hazvichazove dambudziko.
Pakati pezvakakurumbira zvitsva zvinosvika naVivaldi 2.10 isu tine:
Ikozvino inoratidzwa seyakagadziriswa Chromium vhezheni (Mushandisi Wemashandisi).
Kugona kuronga iyo yemuvara / theme shanduko kuti otomatiki uchinje kubva pachiedza kuenda kurima tema.
Chengetedza iwo mavara munzvimbo dzekuisa kana iwo murairo usati waitwa.
Tsigiro yekutarisa pane yekunakidzwa bar.
Pop-ups yekuwedzeredzwa yakatwasuka panzvimbo pekutenderera.
Vivaldi 2.10 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu. Icho chikuru chekuvandudza chine akawanda matsva maficha atinogona kuona mune iyo kuburitsa chinyorwa cheiyi vhezheni. Kune vashandisi varipo, iyo vhezheni nyowani ichaonekwa seyekuvandudza, kungave kubva kune imwechete browser kana kubva kune software Center.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Vivaldi 2.10 inovandudza kuenderana kwewebhusaiti uye inowedzera shanduko kune Mushandisi Agent
Vivaldi yakavakirwa paChromium, saka nemisiyano, asi yakafanana zvikuru neChannel. IMWE chete nzira yechokwadi ndeyeFirefox.
Mhoro, Abd Hessuk. Ehe, ini ndinotaura nezvazvo mune iyo posvo inotaura nezveChomium.
Yakaburitsa vhezheni itsva yeinjini yemutambo Unreal Injini 4.24